ProCure Proton ọgwụgwọ Center - Proton ọgwụgwọ na New Jersey
Oge Ozi Ọ Na-efu
Ihe kpatara ProCure
Ndị Nlekọta Gị
Mgbasa ozi & Akụkọ
Olee otú Proton Therapy si arụ ọrụ
Gịnị Bụ Ọgwụ Proton?
Ajụjụ Proton Therapy Ajụjụ
Isi na ngwongwo olu
Okpokoro dị nso na Spine
Ihe Ị Ga-atụ anya
Choputa ulo oru anyi
Hazi atụmatụ ọbịbịa gị
Anyị na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ nzuzo ugbu a na ime nleta ọzọ. pịa ebe a iji mụtakwuo ma ọ bụ wepụta oge gụọ ya.
Ndụ Gị Weghachi
Were Ebumnuche Na Ọrịa Cancer Na Proton Therapy Na ProCure
Chọta Azịza Gị Ebe a
Choputa ihe di iche na ProCure
Ogologo ulo ogwu proton guzobere na mpaghara tri-steeti
Ebe mbụ na naanị New Jersey na Pencil Beam Scanning
Ihe kariri ndi oria 5,000 anwaputara kemgbe 2012
Ndị otu proton steeti nwere ahụike na ahụike
Nweta NKE ANYI OZI ANYA VIRTUAL
Hụ n'ime ụlọ ọrụ nka na ịmatakwu ihe banyere ProCure iche.
NKWUKWU EGO NA-EGO
Tongwọ ọrịa Proton Therapy dị irè, chịkwaa, ma zie ezie bụ otu n'ime usoro ọgwụgwọ ọrịa kansa kachasị elu. N’iburu ụzọ n’ezie, usoro proton na-ekesa radieshon n’emegharị ahụ na nkwụsị, na -ebelata mgbasa ọkụ n’anụ ahụ na -ebelata ma belata mmetụta ndị ọ na-enwe.
PROTON Ihe ỌBARA NA-EGO?
Proton Therapy dị irè n'ịgwọ ọtụtụ ụdị ọrịa cancer na etuto ahụ. Laskpụrụ ya dị ka nke laser na-eme ka ọ bụrụ ọgwụgwọ zuru oke maka ụdị ikpe kachasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsị onwe na-emechi emechi, etuto ahụ na-efe efe, etuto ahụ n'akụkụ akụkụ ahụ dị oke mkpa.
Iji Nganga Gosi Onwe Ya
Choputa akuko nke ike na ume site n’obodo anyị.
Gaa Nzukọ Ozi
Mụtakwuo banyere proton therapy na otu anyị na-elekọta ụwa. Sonyere anyi maka oge ihe omuma banyere ulo oru ihe nka. Kpoo isi n’etiti iji dowe ebe gi taa.
Ndị ndu na-elekọta
Ọ bụghị nanị na otu ndị ọrụ nlekọta ọkachamara anyị na-enye ihe kachasị mma na ọgwụgwọ ọrịa kansa, ha na-enyekwa ihe kachasị mma maka ahụike gị n'ozuzu ya. Ndi dibia anyi azutala na ulo akwukwo ndi ama ama n’uwa, tinyere Harvard Medical School, MD Anderson na Mahadum Pennsylvania n’inyocha ihe omimi proton. Site na ndị ọrịa na - eduzi oncology radieshon anyị na ndị nọọsụ oncology na ndị ọrụ nkwado, ndị otu anyị niile na-agba mbọ ịnye gburugburu ebe obibi na-ekpo ọkụ ma na-anabata nke na-eme ka ọgwụgwọ gị ka mma.
Ọ ỌR PRỌ ỌRATE POST PROST NA ỌRERA
Site na sayensị na-adịghị mma nke ọgwụ proton, ndị dọkịta nwere ike ịkọwapụta ụbụrụ ahụ ma belata mbibi nke anụ ahụ na akụkụ ahụ ike. N'adịghị ka ụzarị ọkụ X-ray gụnyere Cyberknife, nke na-adabere na photon iji nweta mkpụrụ ndụ kansa, proton na-etinye radieshon ha kpọmkwem na tumo wee kwụsị.
Rịọ maka ndụmọdụ gbasara ọgwụgwọ Cancer Proton Therapy
Iji mụtakwuo gbasara proton ọgwụ ma ọ bụ ịhazi oge ọhụhụ, biko dejupụta fọm dị n'okpuru ebe mmadụ ga - akpọtụrụ gị ka ị zaa ajụjụ gị.
RigaA na-atụ aro nke radieserAkwadoro osisa
Diagnosis *Achọpụtala m ọrịa kansaAchọpụtabeghị m ọrịa kansa
Kedu ka isiri nụ maka anyị?Ndi AdvocacyGermanNgosipụta Obodo ma ọ bụ Ihe OmumeOnye bụbu onye ọrịa ma ọ bụ ugbu aEnyi ma ọ bụ onye ezinụlọNtuziaka mkpuchiInternetAkwụkwọ Akụkọ AdNdị ọzọNzipu nke dibiaWeebụsaịtị ProCureRadioGuo edemede na akwụkwọ akụkọ, MagazineSocial MediaMgbasa Ozi TVAkụkọ TVVideo
Uru Proton Therapy Uru
N’ebe radieshon X-ray na-esi weputa radieshọn oge ọ banye n’akpụkpọ ahụ ya n’akụkụ nke ọzọ nke akpụ ahụ, ọgwụ proton na-etinye radieshon n’ezigbo n’egwuregwu ahụ na-apụtaghị na ya.
Ndị Mmekọ Ọkachamara
ProCure na-ejikọ aka na ụlọ ọgwụ ndị kachasị na obodo na omume oncology radieshon na-eweta ọgwụgwọ proton na ndị ọrịa. Anyị mmekorita nke ulo ogwu gụnyere Ememe Ncheta Sloan Kettering, Ugwu Saịnaị, Montefiore, NYU, na Northwell Health.
Gwa Anyị Okwu
Chọpụta ma ọ bụrụ na ọgwụgwọ proton bụ ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị maka gị. Kpọtụrụ ndị na-ahụ maka Nlekọta anyị ma ọ bụ rịọ ozi ndị ọzọ na ntanetị.
Pensụl Beam na-enyocha Proton Ọgwụ
Uru nke Proton Therapy vs. Standard radaration
Ihe kpatara Proton Therapy
Kedu ka Proton Therapy si arụ ọrụ?
Ndị dọkịta na ndị ọrụ
Efu na mkpuchi
Ndị Mmekọ Ọgwụ
Ozi Ọrịa Ọhụrụ: (877) 967-7628
Iclọ Ọgwụ: (732) 357-2623
Usoro Usoro ọgwụgwọ: (732) 357-2654
Oge Azụmaahịa: 8: 00Abụ - 5.00 pm NA
© 2019 ProCure Proton Therapy Center. Ikike niile echekwabara. Weebụsaịtị maka ProCure, gụnyere ọdịnaya ya na mmemme, ka enyere ya maka ihe omuma na nkuzi. Emebeghi ya dika ndụmọdụ ahuike, ma o bu imebe ogwu ogwu ma obu ulo ogwu. Ihe omuma a abughi iji dochie anya ya na onye oru ahuike gi. Echiche na echiche e gosipụtara na webụsaịtị a apụtachaghị nke ProCure. ProCure kpebisiri ike inye webusait nke enwere ike ịnabata ndị na-ege ntị kachasị. Iji nye aka na mbọ a, a nwere ihe ntụgharị asụsụ. ProCure anaghị akpata ntụgharị sitere na bekee a ga-eche na nke ezighi ezi ma ọ bụ duhie. Biko kpọtụrụ anyị ozugbo ma ọ bụ dọkịta gị iji hazie onye ntụgharị. Site n'iji weebụsaịtị a, ịnabata Usoro eji. Biko gụọ Nkwupụta Nzuzo anyị.
Nhazi websaịtị na mmepe site na Prager okike
Kpọtụrụ ndị na-elekọta anyị na (877) 967-7628